10+ Oprah Winfrey Makotesheni e2020 - Quotes Pedia
11 makotesheni uye kutaura
Hupenyu chipo uye iwe unofanirwa kugara uchiibata yakakosha zvakadaro. Oprah Winfrey agara ave a anotaura achitaura, uyo anotaura nezve hupenyu uye zvinhu chaizvo.
Iye anoti izvo zvakanyanya kukosha kukumbira hupenyu sezvazvinouya, asi panguva imwechete, munhu anofanira kuve nechokwadi chekuti iwe unosarudza chikamu chikuru chehupenyu hwako. Izvo zvese zvinoenderana newe kana iwe uchida kufara. Naizvozvo, iwe unofanirwa kusarudza zvinhu nekuchenjera.
Unofanirwa kuona kuti hupenyu chipo kwauri, uye haizouye kwauri zvakare. Nguva yakambopedzwa yaenda, uye haugone kutarisira kuti ichadzokororwazve. Nekudaro, zviri kwauri kuti iwe unoona sei zvinhu, uye nekudaro, ita shuwa kuti iwe unobata zvinhu zvakanaka.
Uyewo, Oprah Winfrey inotaura kuti isu tinosarudza vanhu vatichakomberedzwa navo! Izvo zvese zviri kwatiri matanho atinotora zvinhu. Nekudaro, iyo duer yedenderedzwa yatinosarudza kugara mairi iri zvese pasi pevedu Nekuda kweizvozvo, tinofanira kugara tasarudza kuve tiri pane vanhu vanotisimudza.
Hatimbofaniri kubvumira vamwe kutiodza mwoyo. Izvo zvakakosha kuva nevanhu vanotikurudzira uye kutikurudzira mukubudirira uye kwete nevanhu vanova chikonzero chekusuwa kwedu.
Oprah Winfrey Quotes agara achikurudzira vazhinji, uye agara achionekwa kukurudzira vanhu kuti vafare uye vave nehungwaru.
Anoti iwe haufanire kumboverenga zvikanganiso zvako sechinhu chikuru chikanganiso chaungave wakamboita, uye enda nekupfidza nezvazvo kweupenyu hwese. Panzvimbo pezvo, iwe unofanirwa kugara uchimaka iwo sezvidzidzo zvako uye kuziva kuti vakuunza pano kusvika ikozvino. Iko kukanganisa kwako kunoita kuti uve neuchenjeri!
Oprah Winfrey yagara ichikurudzira vanhu pasi rose. Nekuda kweizvozvo, anodaro kuti iwe unofanirwa kutora hupenyu nenzira kwayo, uye ipapo ndipo uchazokwanisa kuva nezvakawanda kubva pazviri.
Oprah Winfrey Quotes uri kuzvitsanangudza uye mune zvakawanda zvacho, waizomuona achibvunza vanhu kuti vatarise kudzika kwehupenyu pane kungoona urefu hwayo.
Iye anoti icho chakakosha rarama yega imwe neimwe nguva yehupenyu hwako, pane kungoona pahuwandu hwemakore aunorarama!
Zvitenderedze nevanhu chete vari kuenda kuzokusimudzira kumusoro. - Oprah Winfrey
Kudiwa kwekuva nevanhu muhupenyu hwako vanozosimudzira mweya yako, kukukurudzira, uye kukusundira…
Shandura maronda ako muhuchenjeri. - Oprah Winfrey
Kukundikana muhupenyu hakudzivisiki. Tichava nemugove wedu wekukwira nekudzika. Tinofanira kutarisana ...
Iwe unova izvo zvaunotenda, kwete zvaunofunga kana izvo zvaunoda. - Oprah Winfrey
Tese isu tinoteedzera seti yemitemo inotitungamira muhupenyu. Panguva imwe chete, vese…
Ita zvaunofanira kuita kusvikira iwe wagona izvo zvaunoda kuita. - Oprah Winfrey
Chinhu chikuru pane zvese chaungatore kurarama hupenyu hwehope dzako. - Oprah Winfrey
Kuita zvakanaka panguva ino kunokuisa munzvimbo yakanaka yenguva inotevera. - Oprah Winfrey
Kuita zvakanaka panguva ino kunokuisa munzvimbo yakanaka yenguva inotevera. - Oprah…
Iwe ndiwe une mhosva yehupenyu hwako. Iwe haugone kuramba uchipa mumwe mhosva mhosva yekusagadzikana kwako. Hupenyu chaizvo ndezvekuenderera mberi. - Oprah Winfrey
Iwe ndiwe munhu anoona nezve hupenyu hwako. Kunyangwe zvinhu zvikazosvika paku…
Iko kuvimba mumiviri yedu, pfungwa, nemweya zvinotibvumidza kuramba tichitsvaga zvitsva. - Oprah Winfrey
Hachisi chinhu asi kuvimba mumiviri yedu nepfungwa ndizvo zvichatibatsira kusangana…
Tenda nezvauinazvo; unozopedzisira wave nezvimwe. Kana iwe ukaisa pfungwa pane izvo zvausina, haumbofi wakamboita zvakakwana. - Oprah Winfrey
Muhupenyu, hapana chikonzero chekukakavara pamusoro pezvinhu zvausina! Izvi hazvizoite chinhu uye…